Ukuhlala kwepulazi lezinto eziphilayo ezintabeni ngokudla&Onsen!
Siqhuba ukulima okungokwemvelo ngenkathi sijabulela ingadi yemifino, ubuciko be-bonsai, nemisebenzi yezandla yezinkuni. Cishe konke ukudla okuvela epulazini lethu noma ezintabeni. Uzothola indlela yokuphila yasemaphandleni yaseJapane engekho.
・ Asikhulumi kahle isiNgisi kodwa sizoxhumana nawe sisebenzisa umhumushi. Ubaba wethu ukhuluma isiNgisi kancane
・ Kusukela ngo-Okthoba kuya kuNdasa, kubanda kakhulu neqhwa. Ayikho imisebenzi yangaphandle etholakalayo ebusika.
・ Azikho izitolo nezindawo zokudlela ebangeni elihambayo. Kuyiphuzu elihle futhi ukuhlukana nempucuko.
・ Inja esihlala nayo inamahloni kakhulu. Angase abe nomsindo ekuqaleni, kodwa uzojwayela maduze.
Endaweni ecebile yemvelo, i-onsen yemvelo enombono omangalisayo wezintaba iyatholakala eduze kwendlu. Amathikithi e-Osen e-Notoro Onsen afaka phakathi.
Umfula omncane onamanzi acwebile ugeleza eduze kwendlu yethu, futhi wonke amanzi esiwasebenzisayo amanzi amaminerali emvelo avela entabeni. Imnandi ngendlela emangalisayo.
Kudingeka sibe se-Cafe Hitotoki njalo ngezimpelasonto, kodwa phakathi nezinsuku, ezinye izinkundla zokuxhumana ziyatholakala ukuze sizizwele izindlela zethu zokuphila ezifana nokutshala irayisi nokuvuna ngendlela yokulima okuphilayo, ukuvunwa kwemifino, ukugawula izinkuni, ukwenza ama-noodle kabhakwheat nokunye.
Sazise ngaphambilini uma ungathanda.
Kudingeka sibe se-Cafe Hitotoki njalo ngezimpelasonto, kodwa phakathi nezinsuku, ezinye izinkundla zokuxhumana ziyatholakala ukuze sizizwele izindlela zethu zokuphila ezifana nokut…